N'oge na-adịghị anya ị ga-enwe ike ibudata maapụ na-adịghị n'ịntanetị na SD na Google Maps | Gam akporosis
Nke ikpe azu anyi mara banyere Google Maps bu mmeghe nke beta ya mere inwere ike inweta ya ma nweta akụkọ kacha ọhụrụ n’ihu onye ọ bụla. Nke a pụtakwara na ị nwere nsụgharị nwere ike ịnwe ụfọdụ chinchi yana ahụmịhe onye ọrụ ezughi oke. Uzo ozo di iche-iche nke izu ndi a bu eziokwu bu na o puru ime kekọrịta ETA so onye ọ bụla ka ha mara ebe anyị na-aga.
Mana ihe na-atọ ụtọ banyere beta 9.31 bụ na ị nwere ike budata maapụ na-anọghị n'ịntanetị na kaadi micro SD ka ị nwee ike ịhapụ ebe nchekwa dị elu nke megabytes ndị ahụ ọ na-eji. Anyị ga-ekwukwa na ọ bụghị naanị na akụkọ dị na ikike ahụ maka map ndị na-adịghị n'ịntanetị, kama na anyị na-arụ ọrụ na ọtụtụ ngagharị n'okporo ụzọ na ọkwa iji mara na anyị nwere atụmatụ nke ụlọ dị njikere ka anyị wee nwee ike inyocha ya.
Banyere ọtụtụ ụzọ, n’afọ gara aga ka Google tinyere ikike ịgbakwunye naanị otu. Mana ọ bụ ugbua mgbe ịnwere ike ịgbakwunye ọtụtụ ihe ịchọrọ maka otu njem. Banyere ọkwa maka atụmatụ ime, ha na-anọ naanị maka ọdụ ụgbọ elu n'oge a. Atụmatụ dị ụtọ maka ndị na-eme njem n'ụgbọ elu maka ọrụ ma ọ bụ ndị na-aga ebe ọzọ maka ezumike, yabụ ha ga-enwe map ọdụ ụgbọ elu site na mkpanaka ha na-enweghị ịchọ otu n'otu ebe ahụ.
Ihe kacha adọrọ mmasị banyere beta a bụ ikike ibudata ya maapụ offline na SD iji mee ka ebe nchekwa dị ntakịrị dị ntakịrị maka faịlụ ndị ahụ dị arọ. Ugbu a, anyị ga-echere ka ụdị nke ikpeazụ ahụ ga-abịarute nke ga-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ dị iche iche dịka ndị ahụ kwuru maka ọtụtụ iyipụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » A ga-emelite Google Maps n'oge na-adịghị anya yana nhọrọ iji budata map ndị ahụ na-enweghị njikọ na SD
Johi Onye njem dijo
A ga-emelite ya na ọkwa nke igwefoto ọsọ ọsọ na oke ọsọ ga-abụ ozi kachasị mma.
Zaghachi Johi Viajera
Ọ ga-akara m mma ịnweta oke ọsọ na Waze ebe a na Spain! Ekele m na ị nọ izu ụka nke ọma!